Kedu ihe kpatara oke ifufe mmiri karịa ebe enwere ọtụtụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri? | Netwọk Mgbasa Ozi
Oké ifufe mmiri na-achọ ịmata ihe n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa. Oké ifufe nke dị kpọmkwem n'okporo ụzọ abụọ nke ụgbọ mmiri na-ekwo ekwo n'ụwa, ha dị ike karịa mpaghara ndị ahụ nke oke osimiri ebe ụgbọ mmiri anaghị aga.
Nke a nwere ike ọ gaghị abụ ọhụụ. Ya mere na-eme nnyocha duziri Katrina virtu, ọkà mmụta sayensị na-ahụ maka sayensị na mbara igwe na NASA Marshall Space Flight Center, na Huntsville, Alabama, na Joel Thornton, onye ọkachamara na otu ọkachamara na Mahadum Washington na Seattle, ụlọ ọrụ abụọ dị na United States amụọla ihe kpatara ya ji eme. nke a.
1 Oke ebili mmiri
2 Gbanwee na igwe ojii
Oke ebili mmiri
Iji ghọta ihe kpatara oke ifufe nke oke osimiri na mpaghara ebe ụgbọ mmiri na-agabiga na ebe ha esighi ike, ndị otu Katrina sere ma hụ àmụ̀mà gafee ụwa.
Na-enyocha nkesa na ọnụnọ nke àmụmà gburugburu ụwa, achọpụtara na ha na-ada ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke di n'elu uzo ahia kariri nke oke osimiri Indian Ocean na South China Sea karia mpaghara oke osimiri nke di nso na uzo ahia ma nwekwa oke ugwu.
Enwere ike ịkọwa ọdịiche a na ọnụnọ nke oké ifufe n'otu ebe na onye ọzọ site na usoro ebumpụta ụwa ma ọ bụ "ihe ndaba dị mfe", mana ekwubiri na aerosol ahụ nke anwụrụ ọkụ nke ụgbọ mmiri na-ebute ha na-agbanwe usoro igwe ojii haziri n’elu oké osimiri.
Gbanwee na igwe ojii
Gbọ mmiri gas na-eme n’okuku ga-agbanwe igwe ojii n’elu mmiri. N'ihi nke a, ọtụtụ ebili mmiri dị ike karị na-eme ebe ụzọ ụgbọ mmiri kachasịkarị, ebe ọ bụ na ha bụ mpaghara ebe ndị ọzọ anwuru aerosol.
Ndị ọrụ nyocha ahụ kwubiri na irighiri ihe ndị anwụrụ ọkụ si n'ụgbọ mmiri na-eme ka ụmụ irighiri mmiri dị n'ígwé ojii dị ntakịrị, na-eme ka ha dị elu karị na mbara igwe. Nke a na - eme ka akpụrụ mmiri buru ibu ma na - eduga n'ịrụ ọrụ eletrik.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe kpatara oke ifufe mmiri karịa ebe enwere ọtụtụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri?